अदालतमाथि ओलीको आक्रमण, दुनियाँमा कहिँ नभएको नजिर कायम गरेको भन्दै दिए यस्तो कडा चेतावनी ! — Imandarmedia.com
अदालतमाथि ओलीको आक्रमण, दुनियाँमा कहिँ नभएको नजिर कायम गरेको भन्दै दिए यस्तो कडा चेतावनी !
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुनियाँमा कहिँ नभएको नजिर कायम गरेको भन्दै अदालतलाई चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतको फैसलाको वाक्य वाक्य, शब्द शब्दको मूल्यांकन हुने चेतावनी दिएका हुन्।
अदालतलाई धेरै विवादमा ल्याउन जरुरी छैन, अदालले जे गर्‍यो त्यसको मूल्यांकन होला, वाक्य वाक्य शब्द शब्दको मूल्यांकन होला, कोही पनि इतिहासको खरो मूल्यांकनबाट उम्किन पाउँदैन’ उनले भने।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले अदालतले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाएर दुनियाँमा कहिँ नभएको नजिर कायम गरेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो । त्यस्तै धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावी वैधानिक रहेको भन्दै अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिएको थियो।
मंगलबार ओलीले उक्त फैसलाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताएका हुन्।
उनले अदालतजस्तो सबैले विश्वास गर्ने संस्थाको विश्वासमा कमी आउन नहुने बताए । ‘जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरुबीच सन्तुलन नबिग्रोस्, मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संस्थाहरु आआफ्नो मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ’ ओलीले भने।
शान्ति, सुशासन र विकासको बाटो समातिसकेको देश फेरि लोकतान्त्रिक प्रणाली छाडेर गठबन्धनको सिद्धान्तमा लागेको पनि उनले बताए। यसले विकासको अभियानलाई यसले ड्राइभ गर्न सक्दैन’ उनले भने।
यतिबेला अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी नेपालमा चर्चाको केन्द्रमा छ। नेपालमा एमीसी पास गराउन अमेरिका हात धोएरै लागि परेको छ । एमसीसीको विरोध गर्ने सांसदहरुलाई अमेरिकाले नेपालस्थित दुतावासमै बोलाएर अनेकन प्रलोभन देखाउन थालेको छ भने उता चीन भने एमसीसी रोक्न नेता देखि मन्त्रीका घरघरमा धाउन राजदुत खटाएको छ। चीन र अमेरिकाका कारण देशको राजनीतिमा भित्रभित्रै बबण्डर मच्चिएको छ। एमसीसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेनाले राज गर्ने र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई निशाना बनाउने रणनीति अमेरिकाको रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी चर्चामा छ। यो विषय भित्र भित्रै पेचिलो बन्दै गएको हो । पौष ५ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघठन गरे पछि लगभग चर्चा शुन्य जस्तै भएको एमसीसी देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि फेरी तातेको छ।
जनदवाव व्यापक भएपछि बाहिर अहिले एमसीसी पास नगर्ने भने जसरी सरकारले सन्देश दिएको छ तर भित्रै भित्रै यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी जे बेरी र चिनिँया राजदुत होृउ यान्छीले व्यापक सक्रियता बढाएका छन्।
अमेरिकी राजदुत बेरी र चिनीयाँ राजदुतले पालैपालो मन्त्री र शिर्ष नेताहरुलाई भेटिरहेका छन्। आजै मात्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषाललाई अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीले भेटेका छन्। साउन १५ गते चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मन्त्री भुषाललाई भेटेकी थिइन्। उर्जामन्त्रालय एमसीसी सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो।
यान्छीले भेटेको १० दिनमै अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीले पनि ऊर्जामन्त्रीलाई भेट गर्दै द्धिपक्षीय सहकार्यबारे छलफल गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले द्धिपक्षीय हित र चासोका विषयमा कुरा भएको जनाएको छ।
बहुचर्चित एमसीसी क्म्प्याक्टमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिरहेको बेला एमसीसीको सम्बद्ध मन्त्रालयकी विभागीय मन्त्री र राजदूतको यो भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ। चिनियाँ राजदूत यान्छीले मन्त्री भुषालसँगको भेटमा पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबारे चासो जनाएकी थिइन्।
हिजो मात्रै चिनियाँ राजदुत यान्छीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकी थिइन्। यता यान्छीको सक्रियता बढिरहँदा बेरीको सक्रीयता पनि कम छैन दुई दिन अघि मात्रै बेरीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण सँग भेटेका थिए
अमेरिकी राजदुत बेरीले पछिल्लो समय संचार माध्यममा अन्तवार्ता दिने देखी अस्वाभाविक सक्रियता देखाइरहेका छन्। बेरीले प्रधानमन्त्री देउवा सँग पनि पटक पटक भेटघाट गरेका छन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सँग पनि भेट गरिसकेका छन् ।
चिनिँया राजदुत होउ यान्छीले पनि प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल लगायतसँग भेटघाट गरेकी छिन्। एमसीसीको विषय पेचिलो बेनेका बेला अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको सक्रियतालाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।